အပြည့်အဝပိတ် Pallet Changer Fiber လေဆာပိုက်နှင့်စာရွက်သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းစက် - ရွှေလေဆာ
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: gf-1530JHT / gf-1560JHT / gf-2040JHT / gf-2060JHT
format ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း: 1.5 ×3မီတာ, 1.5 ×6လ,2×4မီလီယံ,2×6လ, 2.5 ×6လ
ပိုက်အရှည်:6လ
သက်ဆိုင်ပြွန်အမျိုးအစား: က Round, စတုရန်း, စတုဂံ, ဘဲဥပုံ, ခါးလှည့်လည်ပြွန်, etc
လေဆာပါဝါ: 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W
လေဆာအရင်းအမြစ်: nLIGHT / IPG / Raycus Fiber လေဆာ
ဤသည် ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် တစ်ရှိပါတယ် အပြည့်အဝပူးတွဲအကာအကွယ်အဖုံး တစ်ခု လဲလှယ်စားပွဲပေါ်မှာ နှင့် ပြွန်ဖြတ်တောက်ခြင်း device ကို ပူးတွဲမှု။ သတ္တုပြားများနှင့်ပြွန်တူညီသောစက်ပေါ်ဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်က high-performance ကို CNC လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း စနစ်, ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်တင်းကျပ်သောပရိသဖြစ်စဉ်ကိုသတ္တုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, တည်ငြိမ်မှု, ထိရောက်မှုနှင့်တိကျသေချာ လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်။ စစ်ဆင်ရေးပိုလုံခြုံဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်းထိရောက်မှုဖြတ်တောက်တိုးတက်ကောင်းမွန်မသာ။
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပြည့်အဝပိတ် Pallet Changer Fiber လေဆာ - ပူးတွဲအလုပ်အာကာသသင့်ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလုံခြုံစေသည်!
တင်အချိန်ချွေတာ in-line ကို pallet changer, လဲလှယ်အစာရှောင်ခြင်း။
အလိုအလျောက် dual-pallet စာရွက် changer ။ 1500mm × 3000mm (5 '' 10 × '), 1500mm × 4000mm (5' '13 ×'), 1500mm × 6000mm (5 '' 20 × '), 2000mm × 4000mm (6.5' '13 ×'), 2000mm × 6000mm (6.5 '' 20 × '), 2500mm × 6000mm (8.2' '20 ×) ကို formats ရရှိနိုင်အလုပ်လုပ်။
အမြင့် Damping အိပ်ရာ
အိပ်ရာထက်ပိုမို 12 နှစ်တစ်ဦးသကျတမျးအတူစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်ဖို့ကုသမှုအိုမင်းကို double-annealed, တုန်ခါမှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Chuck အလိုအလျောက်ပြွန်အမျိုးအစား, အချင်းများနှင့်နံရံအထူအညီ Clamp အင်အားညှိ။ အဆိုပါပါးလွှာ-တံတိုင်းကာရံထားသောပြွန်ပုံပျက်သောမကြီးပြွန်တင်းကျပ်စွာရောက်သည်နိုင်ပါသည်။
အစာရှောင်ခြင်းအမြန်နှုန်း, ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်း 90m / မိနစ်
အလှည့်မြန်နှုန်း 180R / မိနစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine လှူဒါန်းခဲ့သောအလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဂုဏ်ယူစွာ!
ပုံစံ gf-1530JHT / gf-2040JHT / gf-2060JHT / gf-2560JHT
လေဆာပါဝါ 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W
လေဆာအရင်းအမြစ် nLIGHT / IPG / Raycus Fiber လေဆာ
စာရွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဧရိယာ 1.5 ×3မီတာ,2မီလီယံ×4မီလီယံ,2မီလီယံ×6လ, 2.5m ×6လ
tube အပြောင်းအလဲနဲ့ ပြွန်အရှည်3မီတာ,4မီလီယံ,6လ
positioning တိကျမှန်ကန်မှု ± 0.05mm
ထပ်ခါတလဲလဲ positioning ကိုတိကျမှန်ကန်မှု ± 0.03mm
အများဆုံးအနေအထားမြန်နှုန်း 120 မီလီယံ / မိနစ်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ AC380V 50 / 60Hz
အလိုအလျောက် Bundle ကို Loader ကို Tube လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Fiber လေဆာ Tube ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
မိုးသည်းထန်စွာ Duty ပိုက်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Pallet ချိန်းစားပွဲတင်နှင့်အတူစက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပြည့်အဝပိတ် Fiber လေဆာ
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖွင့်အမျိုးအစား Fiber လေဆာ
Dual-Function Fiber လေဆာသတ္တုစာရွက် & Tube ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
မြင့်မားသော Precision Linear မော်တော် Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
စာရွက်သတ္တုလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ, ဟာ့ဒ်ဝဲ, မီးဖိုချောင်သုံး, အီလက်ထရောနစ်, မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ, ကြော်ငြာ, ယာဉ်, အလင်းရောင်, အလှဆင်, လက်ဝတ်ရတနာ, မျက်မှန်, ဓာတ်လှေကား panel က, ပရိဘောဂ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေနံတူးဖော်ရေး, display ကိုကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း, စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောစက်ယန္တရား, အစားအစာစက်ယန္တရား, တံတား, သင်္ဘော, အာကာသ, ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းများ, etc
ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ, သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်, အလွိုင်း, တိုက်တေနီယမ်, လူမီနီယံကြေးဝါကြေးနီနှင့်အခြားသတ္တုပြားနှင့်ပိုက်များ။
ဖိုက်ဘာလေဆာသတ္တုစာရွက်နှင့် Tube နမူနာဆန္ဒပြဖြတ်တောက်ခြင်း
<< ဖိုင်ဘာလေဆာသတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းနမူနာအကြောင်းပိုမို Read
အကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် quotation အဘို့ရွှေလေဆာကိုဆက်သွယ်ပါ ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ။ အောက်ပါမေးခွန်းများကိုသင်၏တုံ့ပြန်မှုကိုအသင့်တော်ဆုံးစက်ကိုအကြံပြုကူညီပေးပါမည်။
1. သတ္တု၏အဘယျ type ကိုသင်ဖြတ်ဖို့လိုသလဲ သတ္တုစာရွက်သို့မဟုတ်ပြွန်? ကာဗွန်သံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိသို့မဟုတ်လူမီနီယမ်သို့မဟုတ်သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိသို့မဟုတ်ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းသို့မဟုတ်ကြေးနီ ... ?
2. စာရွက်သတ္တုဖြတ်တောက်လျှင်, အထူကဘာလဲ? သငျသညျအဘယျသို့အလုပ်လုပ်အရွယ်အစားလိုအပ်သလဲ? သတ္တုပြွန်သို့မဟုတ်ပိုက်ဖြတ်တောက်လျှင်, ပိုက် / ပြွန်များ၏နံရံအထူ, အချင်းနှင့်အလျားကားအဘယ်သို့နည်း
3. သင်၏အချောထုတ်ကုန်ကဘာလဲ? သင်၏လျှောက်လွှာစက်မှုလုပ်ငန်းကဘာလဲ?
4. သင့်အမည်, ကုမ္ပဏီအမည်, အီးမေးလ်, တယ်လီဖုန်း (WhatsApp ကို) နှင့်က်ဘ်ဆိုက်?
မော်ဒယ်အမှတ်။ : gf-1530T / gf-1540T / gf-1560T
မော်ဒယ်အမှတ်။ : gf-2040T / gf-2060T